LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၈ Hogsmeade Village ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လာရောက်ပါ
16 / 05 / 2021 03 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 483 Views စာ0မှတ်ချက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, 76392 HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင်, ဒင်းသောမတ်စ်, လမ်းဆုံလမ်းခွ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Hogsmeade, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Madam Rosmerta, မစ္စတာ Flume, မစ္စစ် Flume, ပါမောက္ခ McGonagall, reviews, Ron Weasley, Winter Village Collection
အဆိုပါမှအများဆုံးအံ့သြစရာများအပြင် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 20 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်လိုင်း -Up အနာဆိုး 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyဒီအင်အေကိုပိုမိုပိုက်ဆံအိတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည့်အရာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်.
ဒီအဆောက်အအုံနှစ်ခုဟာနှစ် ၂၀ မြောက်လှိုင်းကြားထဲမှာကွဲပြားနေတယ်၊ ​​ဒီဟာကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဖူးဘူးartအတွက်ကျေးရွာ wizarding ရွာ Lego မတိုင်မီ။ ဒီနှစ်နွေရာသီမှာတည်ဆောက်ထားသည့်အရာအားလုံးနီးပါး၏အမြစ်များကိုခြေရာခံနိုင်သည့်နေရာတွင်မူရင်း ၂၀၀၁ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်း - bar - ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ 76392 HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင် - ဒီဟာငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးခရီးပဲ Lego Hogsmeade
၎င်းသည်ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆောင်းရာသီကျေးရွာမျက်နှာပြင်သို့အသာစီးရရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပရိသတ်များကသူတို့၏ခြေချောင်းများကိုလွမ်းဆွတ်မှုရေကူးကန်ထဲသို့နှစ်မြှုပ်ခြင်းများသာမကပရိသတ်ကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 851-piece set တစ်ခုတွင်ရှူရှိုက်မိနေသောအလားအလာများစွာရှိသည် - သို့သော်၎င်းသည်ပလပ်စတစ်တွင်မည်သို့သက်ရောက်သနည်း။
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 69.99 / $ 79.99 / € 79.99 အပိုင်းပိုင်း: 851 အသေးစားပုံများ: 7
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမတူဘဲ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyစာအုပ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေ Scribbulus Writing Supplies ကိုတကယ်မှတ်မိနေတဲ့ဈေးဝယ်လမ်းရဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုနက်ရှိုင်းစွာငုပ်ဝင်ရန်ပေါင် ၃၇၀ တန်ဖိုးရှိဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ - 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် ရုံနှစ်ခုအဆောက်အ ဦး အတွက်ရွာတစ်ခုလုံးကိုထပ်မံဖန်တီးရန်မတတ်နိုင်သောတာဝန်ရှိသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီဇိုင်နာများသည် Broomsticks အရက်ဆိုင်သုံးအရက်ဆိုင်နှင့် Honeydukes ချိုသောဆိုင်ရှိ Hogsmeade ၏အထင်ရှားဆုံးအဖွဲ့အစည်းများကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် Diagon Alley ၏အဆောက်အ ဦး များနှင့်အတူတူပင်မျက်နှာစာချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆောင်းကျေးရွာစုဆောင်းခြင်းကိုခံယူထားကြပြီး၎င်းသည်သူတို့ကိုမြင့်မားစွာတည်ဆောက်နိုင်ပြီးအသေးစိတ်များစွာထုပ်ပိုးနိုင်သည်။
ဒါ p ပါartHoneydukes တွင်အခြေခံသည်အရောင်အသွေးစုံလင်သောပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းအစများနှင့်ကစားရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဒါဟာဆင်တူပါတယ် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyအကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းများဖြင့်အတွင်းပိုင်းသည်၎င်း၏ကြမ်းပြင်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ကျရောက်ပြီး 18+ တည်ဆောက်မှုအတွက်ခြေလှမ်းတစ်ခုလိုအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
နှင်းဖုံးနေတဲ့ဆောင်းရာသီမှာတကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခံစားရသည့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ခံစားမှုမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်မီးဖိုများနှင့်ဖယောင်းတိုင်များကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်အရက်ဆိုင်တွင်လည်းအလားတူပင်။ ဤအထပ်နှစ်ထပ်အတွင်းပိုင်းများသည်အလွန်ထင်ရှား၏ 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်နှင့်, ခြောဆုံးဖျော်ဖြေမှု partမဟုတ်ရင်စိတ်ပျက်စရာရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှု၏ s ကို။
အဖြူရောင်ပြားပြားအနည်းငယ်မှအပအဆောက်အ ဦး နှစ်ခုလုံး၏အပြင်ဘက်တွင်အသေးစိတ်အချက်အလတ်မပါရှိခြင်းနှင့်မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အခြေခံအားဖြင့်တန်းစီရမည့်လုံးဝနာကျင်မှုရှိသည့်စတစ်ကာများအပေါ်တွင်မှီခိုနေသည်။
ထဲမှာပြတင်းပေါက်စတစ်ကာများသတိရပါ 75978 ထောင့်ဖြတ် AlleyQuidditch ရဲ့အရည်အသွေးကဘာလဲ? Honeydukes သည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောကျောထောက်နောက်ခံပြုစာတန်းများကိုယူပြီးပြတင်းပေါက်များပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်အသံကဲ့သို့ပျော်စရာကောင်းသည်။ ၎င်းသည်ဤအစု၏စတစ်ကာများနှင့်သက်ဆိုင်သောရေခဲစိုင်၏အစသာဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့်သော်လည်း, ရိုးရှင်းအတွက်စိတ်ပျက်မိကြောင်းcity တည်ဆောက်မှု၏ - သင်သည်အခြေခံအားဖြင့်အဆောက်အအုံတစ်ခုသို့အထပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်ထောင့်ခေါင်မိုးများကိုသာထောက်ပံ့သည် - ၎င်းသည်စျေးပေါသောအရာမဟုတ်သောကြောင့်ပေါင်မှအနည်းငယ်ပိုမျှော်လင့်ရန်သင့်ကိုခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်။ 69.99 ထုတ်ကုန်။
၎င်းကိုတည်ဆောက်လိုက်သောမြင်ကွင်းသည်ငွေရေးကြေးရေးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်တန်ဖိုးကိုခံစားရသည်အထိအဆုံးသတ်သွားသည်။ သို့သော်သေးငယ်သောလက်အောက်ငယ်သုံးခန်း - ခုံတန်းရှည်၊ မီးခုံတိုင်နှင့်လိုလားသောပိုစတာများကကူညီ။ ဘဝကိုအသက်ဝင်စေခဲ့သည်။ Lego Hogsmeade ၎င်းသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်နှစ် ၂၀ မြောက်စစ်မှန်သောနှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်မလာနိုင်သော်လည်း 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်နှင်းဖုံးနေတဲ့အလှဆင်မှုကအနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့လွမ်းဆွတ်မှုကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်။
ကျနော်တို့အထူးအကြောင်းပြောနေတာပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည် Hogsmeade တွင်အဆင့်များနှင့်အခမဲ့ကစားနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေချိန်တွင်ပါ။ ထိုသဘောမျိုးဖြင့်စိုက်ပျိုးရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒီဇိုင်းရွေးချယ်သည် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် ဆောင်းရာသီတွင်မြဲမြံစွာပြသနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ကွင်းပေါ်တွင်ပုံဖော်ထားသည့်တည်နေရာကိုတိကျစွာဖော်ပြထားပြီးနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားသို့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။
အနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လှိုင်း၏သေးငယ်သောအစုံသည်အများအားဖြင့်ယခုနှစ်သေတ္တာများ၌အင်္ဂတေအသုံးပြုသည့်သုံးခုကိုအားကိုးရန်အများအားဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိသော်လည်း 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် ၎င်းသည်၎င်း၏ minifigure ရွေးချယ်မှုတွင်ကိုယ်စားပြုသည့်နယ်မြေသစ်သို့ကျရောက်သည်။ ၎င်းသည်ခုခံအားခုနစ်ခုအနက်အမှတ်အသားအသစ်သုံးခုကိုယူဆောင်လာသည်။
Honeydukes ပိုင်ရှင်များဖြစ်သူ Mr. Flume နှင့် Mrs. Flume တို့သည်မင်း minifigure ပုံစံဖြင့်မည်သည့်အခါမျှမမြင်တွေ့နိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသောအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဤ set Virtual ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီပါ။ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ: နှစ် 1-4) ။ သူတို့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်မဟုတ်ပေမယ့်ဝါရင့်စုဆောင်းသူတွေအတွက်တော့ Ron နဲ့ Hermione ထက်ပိုပြီးကြိုဆိုပါတယ်။ (Ron ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပေမယ့်ရွှေကိုသွန်းလောင်း။ )
Madam Rosmerta နှင့်နောက်ထပ်ပါမောက္ခ McGonagall သည်အသစ်ဒီဇိုင်း၏ထူးခြားချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအရာများတွင်ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်တော့မရှိပါ - အထူးသဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Harrys of Army ကိုတည်ဆောက်ဆဲနှင့် အထူးသဖြင့် သင်ရွှေ ၂၀ နှစ်မြောက်အသေးအဖွဲများကိုစုဆောင်းနေလျှင်။
စဉ် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် ပေါင် ၆၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၇၉.၉၉ / ယူရို ၇၉.၉၉ အတွက် ၈၅၁ ခုနှင့်အသေးစားရုပ်ပုံ ၇ ခု - စက္ကူပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောစာချုပ်ပါ ၀ င်သည်။ လိုင်စင်မပါသောအခင်းအကျင်းတွင်ပင်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကနည်းနည်းလေးမှသေးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုစုဆောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိပြီးသား Winter Village display ကတဆင့်ဖြစ်စေ၊ st တစ်ခုအနေနဲ့သုံးခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေချဲ့ထွင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ရတဲ့ build တစ်ခုအတွက် dosh ကိုတင်လိုက်ခြင်းအတွက်သင်နောင်တမရနိုင်လို့ပါ။artသင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြောက် Hogsmeade အဆောက်အအုံများအတွက်အမှတ်ဖြစ်သည်။
76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် Collectible Wizard ကဒ်လေးခုပါ ၀ င်သည်။
သို့ကန ဦး outing သည် Lego Hogsmeade, သင်ထက်အများကြီးပိုဆိုးလုပ်နိုင်ပါတယ် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်။ 851 အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီး, ဒီအနှစ် 20 နှစ်ပတ်လည် set ကို (သာအသင်းအဖွဲ့အားဖြင့်လျှင်) ၏ချဉ်းကပ်မှုပြိုပျက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley wizard ၏ကမ္ဘာ့အထင်ကရစျေးဝယ်သည့်နေရာများအတွက် ပို၍ သင့်လျော်စွာပစ်မှတ်ထားသောပုံစံသို့
အဆောက်အ ဦး နှစ်ခုစလုံးသည် Potter ပရိသတ်များနှင့်အဆင်ပြေစွာရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်လိမ့်မည်။ သူတို့၏အတွင်းပိုင်းတွင်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှုများကသင့်ကိုအလွန်အမင်းမထားသင့်ကြောင်းထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Plus အား - ယခုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုခြင်းခံရသောအခါသင်သည်အခြေခံအားဖြင့်မစ္စတာနှင့်မစ္စစ်ဖလူးမ်တို့ကိုကောက်ယူရန်အခြားအခွင့်အရေးမရနိုင်ပါ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ငါတို့သုံးပြီးစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO Harry Potter ၇၆၃၈၈ Hogsmeade Village Visit တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် တစ်နာရီခွဲလောက်အတူတကွပျံသန်းနေတယ်၊ ​​ဒါကဒီအရွယ်အစားအတိုင်းအတာအတွက်အချိန်သိပ်မပေးပါဘူး။ စတစ်ကာများသည်ကြာချိန်ကို ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်သည်။
LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာတွင်အပိုင်းအစမည်မျှရှိသနည်း 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်?
76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် အပိုင်းအစ ၈၅၁ ခု၊ အသေးအဖွဲခုနစ်ခုနှင့်အရေးမပါသည့်စတစ်ကာစာရွက်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲ 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်?
ဘေးချင်းယှဉ်။ တည်ရှိသောအခါ၊ 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်အကျယ်အ ၀ န်း ၃၀ နှင့်အကျယ်မှာ ၉ စင်တီမီတာရှိသည်။
Lego Harry Potter ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် ကုန်ကျစရိတ်?
76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် မှာစတင်သည် LEGO.com နှင့် Lego ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတိုးဆိုင်များသင်ဝယ်ယူရန်ပေါင် ၆၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၇၉.၉၉ / ယူရို ၇၉.၉၉ အထိသုံးစွဲရမည်။
← နွေရာသီ 2021 LEGO Minecraft အစုံနှင့်ပိတ်ဆို့ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ
Lego BrickHeadz တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်စာရင်းနွေရာသီအစုံ →